အရည်သွေးပြည့်မီသော စားသောက်ကုန်များ ကျယ်ပြန့်စွာ ရရှိရေး IFC မှ သို့ METRO Wholesale Myanmar အမေရိကန်ဒေါ်လာ သ? - Yangon Media Group
အရည်သွေးပြည့်မီသော စားသောက်ကုန်များ ကျယ်ပြန့်စွာ ရရှိရေး IFC မှ သို့ METRO Wholesale Myanmar အမေရိကန်ဒေါ်လာ သ?
ရန်ကုန်၊ ပြည်တွင်း၌ အရည်အသွေးပြည့်မီသော စား သောက်ကုန်များ ကျယ်ပြန့်စွာရရှိရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍကိုပံ့ပိုးသည့်အနေဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာ ရေးကော်ပိုရေးရှင်း(IFC) မှ METRO Wholesale Myanmar သို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၂ဝကို ထောက် ပံ့ကူညီ၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ METRO Wholesale Myanmar သည် ဟိုတယ်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ အစားအသောက် ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်တည်ခင်းသောလုပ်ငန်းများ၊ အသေးစားပုဂ္ဂလိက လက်လီဆိုင်များနှင့် ကုမ္ပဏီရုံးခန်းများအတွက် စားသောက်ကုန်များကို တစ်နေရာတည်းတွင် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှာယူနိုင်ပြီး အရည်အသွေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ပါ အလုံးစုံတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
IFC ဆီက ရရှိတဲ့ အထောက်အပံ့ဟာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်မှာ တည်ဆောက်ပြီးစီးတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အထူးခေတ်မီကုန်သိုလှောင်ရုံကနေ လုပ်ငန်းတွေ စတင်ရာမှာ အောင်အောင်မြင်မြင် ချောချောမွေ့မွေ့စတင်နိုင်ဖုိ့အတွက် အထူးအထောက် အကူပြုပါတယ်”ဟု METRO Wholesale Myanmar ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Jens Michel က ပြောသည်။ IFC အနေဖြင့် စားသောက်ကုန်များ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ နည်းဥပဒေများ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးနှင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကဏ္ဍများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် အစိုးရအပြင် ပြည်တွင်းရှိ စား သောက်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်လျက် ရှိသည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၃ သန်းကို သုံးစွဲထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
”ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အရည်အသွေး မြင့်မားပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းတဲ့ စားသောက်ကုန် တွေ ပေါ်ထွန်းလာစေဖို့နဲ့ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကဏ္ဍထွက် ပြည်ပပို့ကုန်ပမာဏကို ပိုပြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု IFC ၏ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံကိုယ်စား ပြု ဌာနေမန်နေဂျာ Vikram Kumar က ပြောသည်။ METRO Wholesale Myanmar သည် သီလဝါတွင်ရှိသော ကုန်လှောင်ရုံသည် ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးကို ရှေးရှု၍ ကုန်ကျစရိတ်ကို အကျိုးရှိစွာ အသုံး ပြုထားသောကြောင့် စံချိန်စံညွှန်းနှင့်လည်း ကိုက်ညီလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
”ထောက်ပံ့တဲ့ သန်း ၂ဝကိုတော့ စပြီးတော့ Operate လုပ်တဲ့အချိန်မှာ စသုံးနေပါပြီ။ ဒီလ ၁ ရက်နေ့ကစပြီး အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ လက်ကားဖြန့်ဖြူးရေးမှာ စသုံးနေပါပြီ။ ဒီလိုထောက်ပံ့မှုတွေရတဲ့အတွက် လုပ်ငန်းလည်ပတ်တဲ့နေရာမှာ ပိုပြီးတော့ ချောမွေ့လွယ်ကူပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှု ပိုမြန်လာပါတယ်”ဟု METRO Wholesale Myanmar မှ ဆက်သွယ်ရေးအရာရှိ မသိရီ ကြာညိုက ပြောသည်။ METRO Wholesale Myanmar သည် နိုင်ငံတကာ ထိပ်တန်းလက်ကား ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ ဝယ်ယူသူ ၂၄ သန်းကျော်ရှိကြောင်း သိရသည်။
'ပွဲလုပ်ရတယ် ဆိုတာကလည်း ဒီသီချင်းတွေကို တစ်ချိန်တုန်းက ဒီအဘွားကြီးတွေ ဆိုခဲ့တာပါ၊ ဆိုတာမျ??
ရခိုင်ပြည်နယ်နေ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲတော် တိုင်းရင်းသားကျေးရွာတွင် ကျင်းပ